"Ọnọdụ dị iche" bụ ụgha: Kadịnal Marx agoziela ndị mmekọ ụdị n'ụdị-gloria.tv
ig.news  Feb 5, 2018
Kadịnal Munich Reinhard Marx, 64, agbaala ndị Fada ya ume ka nye ndị mmekọ ụdị n'ụdị "nkwado” liturgical [German: "Zuspruch"] tinyekwa, “A hụghị m nsogbu dị n'ime ihea.”
Mgbe ọ na-agwa Bayerischer Rundfunk (February 3), Marx sịrị na ọ chọghị ka aghọtahie okwu ya ka ngọzi agbamakwụkwọ nke ndị mmekọ ụdị n'ụdị, tụmadụ na na ọ bụ ihe a ka okwu ya ga ebute, nke Marx makwa.
Marx zara ajụjụ ma a ga agọzi ndị mmekọ ụdị n'ụdị wee sị, "Ee, enweghị mgbanwe kacha dị ire.” Ọ chọrọ ịtụta atụmatụ ngọzi nke ndị mmekọ ụdị n'ụdị "n'ọnọdụ dị iche iche" wee na-ekwu na ngọzi ndị mmekọ ụdị n'ụdị so n'ihe ndị ahụ "anaghị ahazi ahazi", tụmadụ na ụka na ozioma Chukwu hụrụ mmekọ ụdị n'ụdị ọbụla ka njọ ọnwụ.
Ka ọ si na dị, Marx chọrọ i bo ndị Fada Parish ahụ ibu nke mkpụrụ obi ma ha ga-agọzi [jọgburu onwe ya] ndị mmekọ ụdị n'ụdị ma ha agaghị eme ya. Obere oge, mkpebi ịjụ ngọzi nke ndị mmekọ ụdị n'ụdị ga-abụzị ihe a ga-eji wee chụọ Fada na Germany.
ig.news kwụrụ maka ozi a na Kadịnal Marx atụọla asị n'ihu ụwa nille, "Ọ nweghị mgbe m ji kpọọ oku maka ngọzi ndị mmekọ ụdị n'…  Feb 20, 2018
44  Epr 8, 2018
35  Epr 8, 2018
36  Epr 8, 2018
29  Epr 8, 2018
40  Epr 7, 2018
39  Epr 6, 2018
30  Epr 6, 2018
37  Epr 6, 2018